Caqabada Horyaalla Madaxweynaha Cusub ee Galmudug | Xaqiiqa Times - Online Magazine
Home ARRIMAHA SIYAASADDA Caqabada Horyaalla Madaxweynaha Cusub ee Galmudug
Caqabada Horyaalla Madaxweynaha Cusub ee Galmudug
Gobolada dhexe ee Somaliya waxaa daal iyo diihaaal baday dowlad la’aantii dalkeena, xag nololeed, mid dhaqaale. Balse waxaan wada garawsanayn in dadka deegaankaasi mudanyihiin in ay mar uun aayohooda si habsami ku jirto uga tashandoonaan sida maanta dhacday, in guul doorasho la gaarona waxa ay soo martay turunturooyin, jalaafooyin badan iyo hagardaamooyin ay adagtahay isku duubni la’aanteed in laga gudbo.
Waxaa horay loogu guuleystay dhismaha baarlamaanka iyo gudoonkiisa.
Ka sokow cidda guulaystey maanta oo ah 4ta Luuliyo, 2015 (17ka Ramadaan), haddana waxaan aad ugu farxay sida daah-furnaanta leh ee doorashadu u socotay, wareegii koowaad ilaa kii sadexaadna si habsami leh ugu dhamaatay.
Hadda doorashadii waa lagu kala baxay, Madaxweyne Cabdikarim Xuseen Guuleedna wuu guuleystey. Waa tallaabo horay loo qaaday wallow laga guuleystey mudane waxqabadkiisa lagu wada ledi lahaa, xasilooni iyo barwaaqona lagu wada gaari lahaa.
Dhinaca kale waxaa jira caqabado ku geedaaman maamulka uu hoggaanka u qabtay Mudane Guuleed oo taageero mug weyn ka helaaya dowlada dhexe ee Soomaaliya, waxaana culaysyadaa ka mida;
1. Soo dhisidda xukuumad wada qancin karta qaybaha kala aragtida durugsan ee deegaanku mideeyey sida Aala Sheekh, Ahlu Sunnah iyo Musharrixiinta laga adkaaday oo deegaanno laga taageersanyahay ay jiraan.
2. Doodda iyo loolanka ka taagan qodob dastuuriya oo Puntland iyo federaalka ku kala aragti fogyihiin kaasoo u baahan in Madaxweyne Guuleed oo ka dabaasho.
3. Siyaasada Ahlu-sunnah oo ah beerka jecli xayrta jecli loolan kore iyo mid hoosena la geli doona Madaxda cusub ee Galmudug.
4. Tan ugu culus, uguna dhibka badan waa xoreynta deegaannada weli ku jira gacanta kooxda Al Shabaab oo u baahan in loo wajaho qaab mideysan.
Gunaanadkii, Waxaan hanbalyo iyo bogaadin u dirayaa baarlamaanka iyo guddoonka shirka ee guushaan soo hoyey, iyo dhammaan intii isku howshay samata bixinta shirkii aaya ka tashiga Galmudug. Waxaan dhammaan bulsha weynta Galmudug u rajeynayaa barwaaqo iyo baraare nololeed.
Falanqeeya Siyaasadda Soomaaliya
Previous articleGuuleed oo loo doortay madaxweynaha Galmudug
Next articleQaxootiga Soomaaliyeed ee Botswana oo Xadgudubyo Lagu Hayo